China Pillow Block Bearings ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Xinri
Self Align Ball Ball များ
တွန်းကန်အား Ball bearings
ခေါင်းအုံး Block Ball ကိုဝက်ဝံ
ဘီး Hub Hub
သေးသေးလေးနက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးဝက်ဝံ
ခေါင်းအုံး Block ကိုဝက်ဝံ
●အခြေခံစွမ်းဆောင်ရည်သည်နက်သော groove ball bearings များနှင့်ဆင်တူသည်။
●သင့်လျော်သော pressurizing agent ကိုတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ခေါင်းအုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှုသည်အမှန်တကယ်နက်ရှိုင်းသော groove ball bearing ၏မူကွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အပြင်ဘက်လက်စွပ်အပြင်ဘက်အချင်းမျက်နှာပြင်သည်လုံး ၀ ကိုညီညွတ်မှုရှိစေရန်သက် ၀ င်သောလုံး ၀ လုံးဝိုင်းထိုင်ခုံသို့လိုက်ဖက်နိုင်သည့်လုံး ၀ ဖြစ်သည်။ ပြင်ပအလင်း ၀ င်သည့်အရာသည်အဓိကအားဖြင့် radial load နှင့်ပေါင်းလိုက်သော radial နှင့် axial load များအားအဓိကအသုံးပြုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည် axial ဝန်များကိုတစ်ယောက်တည်းထမ်းရန်မသင့်တော်ပါ။
၎င်း၏အပြင်ဘက်အချင်းမျက်နှာပြင်သည်လိုက်ဖက်ညီမှုအခန်းကဏ္playတွင်ပါ ၀ င်ရန်အတွက် ၀ င်ထိုင်ခုံ၏သက်ဆိုင်ရာခွက်မျက်နှာပြင်သို့တပ်ဆင်နိုင်သောလုံး ၀ ဖြစ်သည်။ ခေါင်းအုံးဘောင်ကိုအဓိကအားဖြင့် radial နှင့် axial ပေါင်းစပ်ဝန်များကိုအဓိကအသုံးပြုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည် axial ဝန်များကိုသာထမ်းရန်မသင့်တော်ပါ။
1. နည်းပါးသောပွတ်တိုက်အားခံနိုင်ရည်၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ စတင်ရန်လွယ်ကူခြင်း၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ ကြီးမားသော ၀ န်ဆောင်မှု၊ အသေးစား ၀ တ်စားဆင်ယင်မှု၊
အရွယ်အစား၊ အပြန်အလှန်အပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်ခြင်း၊ လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြုတ်တပ်ခြင်း၊ လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊
3. အချို့သောဝက်ဝံ Self- align ၏စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်ဖြစ်။ , အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်သင့်လျော်သောတည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု။
(၄) Transmission friction torque သည် fluid dynamic pressure pressure bearing ထက်များစွာနိမ့်သည်။ ထို့ကြောင့်ပွတ်တိုက်အပူချိန်မြင့်တက်မှုနှင့် power သုံးစွဲမှုနည်းသည်။ အစပွတ်တိုက်အားသည်စတင်လည်ပတ်သည့်ပွတ်တိုက်အားထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
၅။ ပြောင်းလဲမှုများကို load လုပ်ရန်ပုံသဏ္bearingာန်ပျက်ခြင်း၏ sensitivity သည် hydrodynamic bearing ထက်လျော့နည်းပါသည်။
၆။ Axial အရွယ်အစားသည်ရိုးရာ hydrodynamic bearing ထက်သေးငယ်သည်။ ဒါဟာ radial နှင့်တွန်းကန်အားပေါင်းစပ်ဝန်နှစ်ခုလုံးကိုဆီးတားနိုင်သည်။
၇။ ထူးခြားသောဒီဇိုင်းသည်အမျိုးမျိုးသောဝန်မှမြန်မြန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိနိုင်သည်။ Bearing စွမ်းဆောင်ရည်သည်ဝန်၊ အမြန်နှုန်းနှင့်လည်ပတ်မှုနှုန်းအတက်အကျများကိုအတော်အတန်အာရုံမခံစားနိုင်ပါ။
၁။ ကျယ်လောင်သောဆူညံသံ။ အပြင်ဘက်အလင်းဆုံမှုန်ဆောင်မှုတွင်ထိုင်ခုံပါ ၀ င်သောအမြန်နှုန်းကြောင့်၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သောအခါအလွန်ဆူညံသံကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
၂။ အိမ်ရာ၏တည်ဆောက်ပုံမှာရှုပ်ထွေးသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဝက်ဝံအမျိုးအစားများကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်၊ ၀ တ်ထားသည့်အိမ်၏ဒီဇိုင်းမှာအတော်အတန်ရှုပ်ထွေးပြီး၊ ၀ င်အိမ်ရာသည်ကုန်ပစ္စည်း၏ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုမြင့်တက်စေပြီး၊ ထိုင်ခုံနှင့်အတူပြင်အလင်းဆုံ bearing ကိုပိုမိုမြင့်မားသည်။
၃။ ဝက်ဝံများကိုကောင်းစွာဆီ၊ ကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားပြီး၊ ဖုန်မှုန့်နှင့်အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်သည့်တိုင်ပုံမှန်လည်ပတ်နေလျှင်ပင်နောက်ဆုံးပေါ်လှိမ့်နေသောမျက်နှာပြင်၏ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့်သူတို့ကျရှုံးလိမ့်မည်။
ခေါင်းအုံးပိတ်ဆို့ခြင်းကိုသတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ သတ္တုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အထည်အလိပ်၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆေးဆိုးခြင်း၊
ရှေ့သို့ စီးရီးထည့်သွင်းမှုမြင့်မားသော UCP 200 နှင့်အတူ bearing
နောက်တစ်ခု: ဘီး Hub Hub
အမြန်နှုန်းခေါင်းအုံး Block ကိုဝက်ဝံ
radial ထည့်သွင်းဝက်ဝံ UCFA
၀ င်ဆန့်ကော်လာနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့် XRL တံဆိပ်ထည့်ခြင်း
XRL အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးအစားထည့်သွင်းဝက်ဝံ UCT200
UC200 ဆောင်သော XRL အမှတ်တံဆိပ်ထည့်သွင်း
Linqing Xinri Precision Bearing Co. , Ltd. သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ မိသားစုအထူးပြုလုပ်သောအသီးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်သည်ရိုးသားမှုဖြင့်ယုံကြည်မှုကိုရရှိခြင်း၊ အရည်အသွေးဖြင့်အောင်မြင်ခြင်း၊ တီထွင်ဆန်းသစ်ခြင်းမှတစ်ဆင့်တိုးတက်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ [.. ]
လိပ်စာ: Yan Dian Town စက်မှုဥယျာဉ်၊ Linqing City, Shandong Province, China
ဖုန်း + 86-635-2857766
ဖက်စ် + 86-635-2857768